Global Voices teny Malagasy » Taratasim-pifandraisana RV: Ahoana no hamoaboasana ireo randram-baovao ao amin’ny Twiter mba hanamoràna ny famakiana ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Taratasim-pifandraisana RV: Ahoana no hamoaboasana ireo randram-baovao ao amin'ny Twiter mba hanamoràna ny famakiana ?
Voadika ny 01 Desambra 2019 3:32 GMT 1	 · Mpanoratra Yanne C Nandika miora
Avy ao amin'ny @ThreadReaderApp
Fanamarihan'ny Rising Voices: ity taratasim-pifandraisanay mpivoaka indroa isam-bolana ity dia manome famintinana ireo lahatsoratra farany nivoaka momba ireo endriky ny fampidirana nomerika, anatin'izany ny fidirana sy ny fampiasàna ireo fitaovana nomerika, ary koa ireo fomba hafa sy hetsika ahafahan'ireo vondrompiarahamonina mandray anjara feno anaty aterineto. Vakio eto  ireo taratasim-pifandraisana efa nivoaka teo aloha.
Misy fotoana ve ianao mila mijery andiana bitsika hanaovana fikarohana, noho ny fanitikitiana, na antony hafa? Nahita fitaovana izahay izay manamora ny asa ary maniry mafy ny hizara izany aminareo!
Ny Thread Reader , fampiharana iray nataonà mpamokatra rindrambaiko mahaleotena, dia natao ho an'ny rehetra mba ho tsara kokoa ny famakiana randram-bitsika lava, na koa hanatsaràna ny fitetezana andianà bitsika mifampitohy. Afaka mijery ny fampitahàna ny taloha-sy-ankehitriny eto  ianao ary eto  kosa raha te hahita ny fomba fiasany.
Araka ny voalazan'ilay mpamokatra, maimaimpoana ity fampiharana ity ary ny tolotra fototra dia hijanona ho toy izay foana . Kanefa kosa, misy singa fanampiny sasany azo vidiana mitokana.
Ho fankalazana ny taona Iraisam-pirenena ho an'ny fiteny indizeny 2019 (#IYIL19 ), dia nanambatra hery tamin'ireo mpiara-miasa aminay ny Rising Voices tamin'ny fikarakarana ireo fanentanana efatra ifandimbiasana ao amin'ny Twitter mba hanasongadinana ny asan'ireo mafana fo amin'ny fiteny indizeny manerantany. Raha liana amin'ny satan'ny fiteny indizeny maneran-tany sy izay mahakasika ny famelomana sy/na fampiroboroboana azy ireny ianao, miangavy anao hanaraka ny fanentanana ataonay ao amin'ny Twitter ! Ary raha te-hahalala bebe kokoa ny momba ny vahininay farany teo ianao, dia azonao jerena tsy amim-pihambahambana ny mombamomba ny lahatsorany araka izao manaraka izao :
@ActLenguas  (Amerika Latina)
Uskam Felix Camey  [es] miresaka momba ny Kaqchikel, teny Mayana, spoken in Guatemala
Verónica Aguilar  [es] miresaka momba ireo teny Mixtec sy ireo anjara asa sahanin'ny fifindramonina sy ny teknolojia anatin'ny fitahirizana ny teny
Claudia Cuba Huamani  [es] miresaka momba ny teny Quechua, tenenina indrindra ao amin'ny Andes Perovianasy any amin'ireo firenena hafa vitsivitsy manaraka ny Tendrombohitra Andes
Osama Manzar , Mpamorona sy Talen'ny Digital Empowerment Foundation (mpiara-miasa anatin'ity hetsipanentanana ao amin'ny Twitter ity), miresaka momba ny fampidirana niomerika anatin'ny asa fitahirizany ireo teny am-bava manerana an'i India
Farhad Shafitul Kabir  miresaka momba ny teny Sylheti, tenenina indrindra any amin'ireo faritra sasany ao Bangladesh sy India
Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien)  miresaka momba ny teny Pinuyumayan, tenin-janatany Taioaney nosokajian'ny UNESCO ho “tandindonin-doza”
Ho fanampin'ireo hetsipanentananay momba ny tenin-janatany maneran-tany, te hisarika ny sainao aminà sarimiaina iray izahay, dia ny The Tree of Love, izay mitantara mivantana ny niainan'ireo ankizy mpiady sy tanora sisam-paty nandritra ny fifandirana tao amin'ny vondrompiarahamonin-janatanin'ny Nasa ao Cauca, Kolombia. → “Vakio ny tantara niseho taty ambadiky ny sehatra momba ny fanamboarana ity sarimiaina fanadihadiana ity .
Tsy ho ela dia hanomboka indray ny andiany vaovao amin'ny fisoratana anarana ho an'ny Famatsiambolan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Demaokrasia, ho an'iroe tetikasa mikendry ny hanohana sy/na hanolotra fandraisana anjara anatin'ireo dingana demaokratika. Atao ato amin'ny aterineto ny fanolorana ireo tetikasa, na amin'ny teny Anglisy izany na amin'ny teny Frantsay. Miangavy anao hijery ny antispirany eto.  Fisokafan'ny fisoratana anarana: 22 Novambra 2019 – 21 Desambra 2019.
Matihanina amin'ny sehatry ny angondrakitra ve ianao na olona miasa miaraka amin'ny lahatahiry goavana ary miraharaha ny vokany eo amin'ny rariny ara-piarahamonina? Ny Data Justice Lab ao amin'ny Anjerimanontolon'i Cardiff (Fianarana Asa fanaovangazety, Media sy Kolontsaina) dia mitady mpiasa roa hanampy azy ireo amin'ity ezaka ity amin'ny lohataonan'ny taon 2020. Miangavy anao hijery ireo antsipiriany eto.  Fara-fandraisana anjara: 30 Novambra 2019.
Miantso ny fandraisanao anjara ny FOSDEM 2020, hetsika maimaimpoana ho an'ireo mpamokatra rindrambaiko, ho an'ny efitra fikirakiràna rindrambaikony momba ny fanoratana Kaody sy ireo Vondrompiarahamonin'ny teny, izay mikendry ny hamaha ny olan'ny tsy fahampian'ny fitaovana sy rindrambaiko entina manamaivana ny fetra eo amin'ny fampiasàna ny teny natoralin'ny tsirairay anatin'ny fifandraisana elektronika. Miangavy anao hijery ny fomba fandefasana tolokevitra ho an'ireo lohahevitra. Fara-fandefasana: 1 Desambra 2019.
Manakaiky ny Fihaonambe voalohan'ny Podcast Azia (virtoaly). Liana handre avy amin'ireo matihanina amin'ny podcast? Tongava mitaky ny fidiranao maimaimpoana mandritra ny 48 ora eto!  Fotoana: 9-10 Novambra 2019.
Ho avy ny Digital Citizen Summit (DCS). Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia ny fanazavana diso sy ny fanomezana vaovao diso anatin'ny tontolo virtoaly ary handinika ireo olana mitombina avy amin'ireo fomba fijery ara-pôlitika sy fampiharana, ary ny zavamisy ara-piarahamonina mifandraika amin'ny mediam-bahoaka. Liana handray anjara anatin'ireo adihevitra? Mangataha fanasàna eto.  Fotoana: 12 Novambra 2019 / Toerana: New Delhi, India. Fanamarihana: mpiara-miombon'antoka anatin'ity DCS ity ny Rising Voices.
Hotanterahina ao Beirut, Libanona, ny Famelabelarana Bread & Net 2019, ampiantranoan'ny Social Media Exchange (SMEX). Fotoana fanararaotana io ho an'izay rehetra voakasika anatin'ireo sehatra maro samihafa ao amin'ny faritra MENA  mba hanamafisana ireo ezaka iombonana ho fampandrosoana ny zon'olombelona anatin'ireo tontolo niomerika ankehitriny. Miangavy anao hijery ireo antsipiriany eto . Fotoana: 15-17 Novambra 2019 ( hatao amin'ny teny Arabo ity hetsika ity)
Namoaka rakibolana an-tserasera amin'ny fiteny indizeny 21 ny fanjakana indiana ao Odisha , hita ato amin'ny Global Voices
Fianarana ny teny Welsh: Mahita fiakaran'ny mpianatra ny rindrambaiko fianarana teny , hita ao amin'ny BBC
#IYIL2019: vondrompiarahamonina maneran-tany ho an'ireo tenin-janatany  — playlist Youtube amin'ny teny maro natambatry ny UNESCO 
Mozeantsaina: Nahoana isika no tokony hikajy ireo fiteny tandindonin-doza , hita ato amin'ny Global Voices
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/01/144625/
 Ny Thread Reader: https://threadreaderapp.com/
 dia hijanona ho toy izay foana: https://threadreaderapp.com/help/about#pricing
 Vakio ny tantara niseho taty ambadiky ny sehatra momba ny fanamboarana ity sarimiaina fanadihadiana ity: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/11/01/the-story-behind-el-arbol-del-amor-an-animated-documentary-from-colombias-indigenous-nasa-community/
 hijery ny antispirany eto.: https://www.un.org/democracyfund/apply-for-funding
 Namoaka rakibolana an-tserasera amin'ny fiteny indizeny 21 ny fanjakana indiana ao Odisha: https://mg.globalvoices.org/2019/10/22/144120/
 Fianarana ny teny Welsh: Mahita fiakaran'ny mpianatra ny rindrambaiko fianarana teny: https://bbc.in/2BLhBFg
 #IYIL2019: vondrompiarahamonina maneran-tany ho an'ireo tenin-janatany: https://bit.ly/2JNrcjk
 Mozeantsaina: Nahoana isika no tokony hikajy ireo fiteny tandindonin-doza: https://mg.globalvoices.org/2019/11/07/144562/